Astaamaha, noocyada iyo firfircoonida cufnaanta hawada | Saadaasha Shabakadda
Cufnaanta hawada waxaa lagu qeexi karaa inay tahay qayb ballaaran oo hawo ah oo leh fiditaan jiif ah dhowr boqol oo kiilomitir. Waxay leedahay sifooyin jireed sida heerkulka, qoyaanka iyo heerkulka toosan ee heerkulka toosan oo ka badan ama ka siman. Tan iyo markii cufnaanta hawada Aad ayey muhiim ugu yihiin saadaasha hawada iyo cimilada, waxaan qormadan oo dhameystiran u hibeyn doonnaa si aan u ogaano astaamahooda iyo dhaq dhaqaaqooda.
Haddii aad rabto inaad ogaato wax kasta oo la xiriira miisaanka hawada, kani waa boostadaada.
1 Noocyada cufnaanta hawada
2 Dhaqdhaqaaqa miisaanka hawada
2.1 Saamaynta Coriolis
2.2 Dabaysha Geostrophic
2.3 Xoog isdifaaca iyo kala wareegga Ekman
Noocyada cufnaanta hawada
Sidii aan hore u soo sheegnayba, qaybtan ballaadhan ee hawadu leedahay kordhin fidsan iyo waxyaabo jireed oo gaar ah ayaa ah waxa aynu ugu yeedhno cufnaanta hawada. Waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo sifooyinka jirka ee ay leeyihiin, gaar ahaan heerkulka. Waxay kuxirantahay heerkulka cufnaanta hawada waxaan heleynaa tiro qabow, sida arctic iyo polar, ama diirran, sida miisaanka hawada ee kuleylaha. Waxa kale oo jira noocyo kale oo kala-soocid ah iyadoo loo eegayo qoyaankeeda, taas oo ah, uumiga biyuhu ka kooban yahay. Cufnaanta hawada leh wax yar oo ku jira uumiga biyaha waxaa loo yaqaannaa cufnaan-qaaradeed. Dhinaca kale, kuwaas hadday uumis la yimaadaan, waa kuwa badda, maxaa yeelay badanaa waxay ku sugan yihiin meelaha ku dhow badda.
Waxaa jira aagag dhexdhexaad ah oo aan ku aragno cufnaanta hawada xilliga jiilaalka iyo xagaaga waxayna ku dhacaan noocyadooda. Aagaggan ayaa ah waxa loogu yeero wajiyadda hawada iyo aagga isku-dhafka is-dhexgalka.
Dhaqdhaqaaqa miisaanka hawada
Hadda waxaan falanqeyn doonnaa firfircoonida cufnaanta hawada si aan wax badan uga fahamno. Waxaa jira dhaqdhaqaaq diyaaradda jiifka ah ee cufnaanta hawada taas oo ay shuruud u tahay cadaadiska cimilada ee ka jira dhulka dushiisa. Dhaqdhaqaaqa miisaanka hawadu waxaa loo yaqaan 'gradient gradient'. Hawada waxay u egtahay inay ka dhaqaaqdo aagga ay cadaadiska badan ku socdaan una socdaan meesha ay ku yar yihiin. Wareegtadan ayaa ah waxa dhidibbada u aada qulqulka ama hawo qaadashada.
Wehliyaha waxaa lagu qeexay farqiga cadaadiska ee aan heli karno. Farqiga cadaadiska ee sareeyaa inta badan ee ay dabayshu wareejiso. Kala duwanaanshahan qiimaha cadaadiska diyaaradda jiifka ayaa mas'uul ka ah isbeddelada ku yimaada dardargelinta cufnaanta hawada. Dardargelintaani waxaa lagu muujiyey inay tahay isbeddel ku yimid xoog halkii unug isla markaana waxay ku tiirsan tahay isobars-ka. Dardargalintaan waxaa loogu yeeraa xoogga wejiga cadaadiska. Qiimaha ciidankani waa mid si qumman ula jaan qaada cufnaanta hawada isla markaana si toos ah ugu dhiganta wejiga cadaadiska.
El saamaynta coriolis Waxaa sababa dhaqdhaqaaqa wareega ee Dunida. Waa weecasho uu meeraha ku soo saaro cufnaanta hawo awgood iyadoo ay ugu wacan tahay xaqiiqda haysashada dhaqdhaqaaq wareeg ah. Leexashadan uu meerahu ku soo saarayo cufnaanta hawo ay sabab u tahay dhaqdhaqaaqa wareegga waxaa loo yaqaanaa saamaynta Coriolis.
Haddii aan ku falanqeyno aragtida joomatari, waxaa la dhihi karaa cufnaanta hawadu waxay u egtahay inay ku socdeen nidaam isku-duwidda dhaqdhaqaaqa. Baaxadda xoogga Coriolis ee halbeegga halbeeggu wuxuu si toos ah ugu dhigmaa xawaaraha jiifka ah ee hawadu xawaceyso xilligaas iyo xawaaraha xagalka ee wareegga Dunida. Xoogani sidoo kale wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay loolka aan joogno. Tusaale ahaan, markaan kujirno dhulbaraha, oo leh loolka 0, ciidanka Coriolis gabi ahaanba waa la joojiyay. Si kastaba ha noqotee, haddii aan tagno tiirarka, halkan waa halka aan ka helno qiyamka ugu sarreeya ee Coriolis, maaddaama loolka uu yahay 90 digrii.
Waxaa la dhihi karaa xoogga Coriolis wuxuu had iyo jeer u dhaqmaa si toos ah jihada dhaqdhaqaaqa hawada. Sidan oo kale, waxaa jira leexasho dhanka midigta ah markasta oo aan joogno woqooyiga woqooyi, iyo dhanka bidix haddii aan joogno koonfurta koonfurta.
Xaqiiqdii waqtigii aad maqashay mararka qaarkood ama wararka. Dabaylaha geostrophic waa midka laga helo gudaha jawiga bilaashka ah ee dhererkiisu yahay 1000 mitir iyo afuufida ku dhowaad dhinaca midig ee heerka cadaadiska. Haddii aad raacdo dariiqa dabaysha geostrophic, waxaad ka heli doontaa xudunta cadaadiska sare ee midigta iyo xudunta hoose ee bidix ee dhinaca woqooyi.
Tan waxaan ku arki karnaa in xoogga miisaanka cadaadiska uu si buuxda isugu dheellitiray xoogga Coriolis. Tani waa sababta oo ah waxay u dhaqmaan isku jiho, laakiin jihada ka soo horjeedda. Xawaaraha dabaylkani waa mid si qumman ula jaan qaadaya sineetka latitude. Waxay macnaheedu tahay isla wejiga cadaadiska ee laxiriira dabaysha geostrophic, waxaan arki doonaa sida xawaaraha wareega uu hoos ugudhacayo markaan usocono dhanka sare.
Xoog isdifaaca iyo kala wareegga Ekman
Waxaan sii wadaynaa inaan sharaxno dhinac kale oo muhiim ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa hawada. Isku dhaca hawada, in kastoo mararka qaar loo arko mid la dayaci karo, haddana uma baahna. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in isku dhaca uu ku hayo dhulka dushiisa uu saameyn aad muhiim ah ugu leeyahay barakaca ugu dambeeya. Waxay ku keentaa xawaaraha dabaysha inuu hoos u dhaco marka uu u dhow yahay dusha sare si uu u qiimeeyo dabaysha geostrophic. Dheeraad ah, waxay u keentaa inay uga sii gudubto isobars-ka si ku sii foogan jihada wejiga cadaadiska.
Awoodda isku dhaca ayaa had iyo jeer u dhaqanta jihada ka soo horjeedka dhaqdhaqaaqa leh cufnaanta hawada. Haddii heerka xumaanta marka loo eego isobars-ka ay hoos u dhacdo, saamaynta khilaafku wuu yaraanayaa, maaddaama aan ku kordhineyno dherer cayiman, qiyaastii 1000 mitir. Waqtigan xaadirka ah dabaylaha ayaa ah geostrophic iyo xoogga khilaafku waa wax aan jirin. Iyadoo ay sabab u tahay awoodda is-khilaafsan ee dusha sare, dabayshu waxay qaaddaa waddo wareeg ah oo loo yaqaan 'Ekman Spiral'.
Sidaad u aragto, firfircoonida miisaanka hawadu aad buu u adag yahay. Waxaa jira arrimo badan oo la tixgelinayo. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto oo aad ku cadeyn karto shakiyada qaar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Cufnaanta hawada
Meel aan jirin